Kubvunzana naJohn Pinzon, Kushambadzira Director wePutumayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Interviews » Kubvunzana naJohn Pinzon, Kushambadzira Director wePutumayo
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ecuador Breaking Nhau • Interviews • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Putumayo.travel ndiyo hofisi yepamutemo yevashanyi / gwara renharaunda yePutumayo iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweColombia pamuganhu neEcuador. Ivo vanopa ese marudzi ese ruzivo nezve nzvimbo dzevashanyi uyezve vanotarisira kukwirisa kushanya muPutumayo.
.Travel: Ndiani putumayo.travel uye urikugara kupi?
Putumayo yekufamba yemawebhusaiti ekushanya atinayo, InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, EU Tiri kuFlorencia - Caquetá Colombia.
Kufamba: Ndivanaani vateereri vako? Ndezvipi zvavanotarisira pavanoshanyira saiti yako? Iwe uri gweta repamutemo here kana iwe unotengesawo kushanya uye zviitiko?
Vedu vatinonangidzira ndevaya vane shungu yekufamba nekumbundikira zvisikwa uye kushanya. Tinoda kuvapa ruzivo rwese rwekushanya rwavanoda nezvePutumayo pamwe nekushanya kwepakeji uye zviitiko zvekushanya sekukwiza mvura, rappel, whitewater rafting, trekking, hiking, zvichingodaro.
Kufamba: Ungatsanangura sei bhizinesi rako hombe uye ndedzipi tsika dzako?
Sezvandambotaura, InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, EU, ikambani yakazvipira mukusimudzira, kupihwa uye kushandiswa kwetekinoroji yeruzivo nekufambiswa mumakambani madiki, madiki, epakati nepakakura, pamwe nekutsigira marongero eRutsvagiridzo neTekinoroji ( I + D) uye ndanga ndichishandira kusimbisa pamwe nekupa simba kwezvikamu zvakasiyana zvehupfumi hwedunhu.
Tine maCore Value mashanu:
- Iva Anofarira, Akagadzira, uye Akavhurika-Pfungwa
- Vaka Hakavhurika uye Hukama Hukama neKutaurirana
- Iva Nekushushikana uye Kutsunga
- Gamuchira uye Dhiraivha Shanduko
- Tevera Kukura uye Kudzidza
Kufamba: Ngatitaurei nezverudzi rwenzendo nenzvimbo dzaunosimudzira pane yako saiti? IColombia, uye kunyanya Putumayo, inzvimbo yemhuri ine hushamwari?
Putumayo ibazi reColombia. Izwi rokuti putumayo rinobva mumitauro yeQuechua. Izwi rechiito p'utuy rinoreva "kubuda" kana "kubuda," uye mayu zvinoreva rwizi. Saka, zvinoreva "kuyerera rwizi." Iyo yakazara nzvimbo yenyika ino inoshamisa ndeye 24,885 km2. Nekudaro, sezvauri kuona pane zvakawanda zvekushanyira uye kupa sezvo yayo hydrography inoshamisa chose nekuda kwenzizi, madhamu uye mapopoma, mhuka dzayo nemiti zvakasarudzika uye zvinonakidza, uye gastronomy yayo yakanakisa. Izvo zvatinoita kusanganisa uye kugadzira mapakeji ayo anodhura uye akakodzera kune ese marudzi evashanyi nemapoka emazera, kusanganisira mhuri.
Kufamba: Unogona here kutsanangura mumutsara kamwechete kuti nei vafambi vachifanira kushanyira Colombia nePutumayo muna 2018?
Kana iwe uchida kugadzira zvisingakanganwike ndangariro, famba kuenda kuPutumayo uye kukwira kuenda ku "Mugumo weNyika" mapopoma, parwendo rwehupenyu hwese.
Kufamba: Ndeapi mafambiro uye zviitiko zviri kukanganisa chikamu chekushanya uye bhizinesi rako nhasi?
Maitiro makuru ari kukanganisa chikamu chekushanya mubhizinesi redu ndea:
Ecotourism: Isu tave kubva kubva kuCustomional Tourism kuenda kuEcotourism. Dzimwe nyanzvi dzinofungidzira kuti ecotourism ikozvino inomiririra 11.4% yemari yese yevanoshandisa. Izvo zvakakosha zvakakosha kumamirioniyamu kuchengetedza iyo yakasarudzika nhaka yakachengetedzwa zvakanaka sechinhu chakakosha kune ecotourists, ichiteverwa nekucherechedzwa kwemiti / mhuka, zviitiko zvehupenyu hwekunze munzvimbo dzakachengetedzwa, uye pekugara pakati pezvakasikwa
Yekushanya Yekushanya: Iri kusimukira nekukurumidza mumusika wedu. Zviitiko zvakaita sekufamba nzendo, kufamba musango, kukwidza ngarava, kukwasva, kukwikwidza, kumisa rafting, uye zip-lining izvozvi zvamira kunze mumusika wekushanya.
Kufamba: Yekubudirira chirongwa chekusimudzira kwekushanya chinoda kuve neinofadza uye inoshanda webhusaiti. Webhusaiti yako inozvisiyanisa sei?
Yedu webhusaiti yakasarudzika nekuda kwechakakosha chaPutumayo uye ine ruzivo rwese rwakakodzera kufukidza zvese zvinodiwa nevashanyi kunzvimbo iyi, zvisinei nezera ravo uye zvavanofarira. Tinopa ruzivo rwakakosha.
Kufamba: Wakazviziva sei uye riini nezve .kufamba uye kutanga kushanda nesu?
Takaziva kumashure ipapo kuti .travel domains ainyanya kukosha kuti azivikanwe munharaunda yekufamba uye yekushanya. Nekudaro, hatina kumira kuti tifunge nezve dzimwe sarudzo, takananga kunotora yedu yega .travel domain.
Kufamba: Kusarudza iyo chaiyo duraini / mhando painternet ndiyo yekutanga nhanho yekubudirira online. Mukuona kwako, ndeapi mabhenefiti akakosha ayo .travel domain inopa kune yako webhusaiti, bhizinesi rako uye kwaunoenda?
- Iko kubvuma kunopa kune iro bhizinesi.
- Mukana wekutsanangudza hunhu hwekushanya paInternet.
- Iko mukana wekuita Putumayo kuzivikanwa pasirese.
- Kubatsira nekukura kwekambani yedu.